Zeziphi izinto i-TPE?
Ngoku ukuba iimveliso ze-TPE zisetyenziswe ngokubanzi kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla nakubomi bethu, inokubonakala kwakhona ukuba iimveliso ze-TPE ziye zaba yimfuneko kubomi bethu, ke zithini izinto ze-tpe eziluhlaza? Ihlanganiswa njani i-TPE? Ukusuka koku ukuqonda:
I-TPE (i-Thermoplastic Elastomer) luhlobo lwe-thermoplastic elastomer material. Inempawu zamandla aphezulu, ukomelela okuphezulu, inkqubo yokubumba inaliti, ukukhuselwa kwendalo, ukungabinetyhefu kunye nokukhuseleka, uluhlu olubanzi lokuqaqamba, ukubala okuhle, ukuchukumisa okuthambileyo, ukumelana nemozulu, Ukukhathala kunye nokumelana neqondo lobushushu, ukusebenza ngokugqwesileyo, akukho mfuneko I-vulcanization, inokuphinda isetyenziswe kwakhona ukunciphisa iindleko, inokuba kukudubula kabini, kugalelwe i-PP, i-PE, i-PC, i-PS, i-ABS kunye nezinye izinto ze-matrix, okanye inokubunjwa ngokwahlukeneyo.
I-TPE inokusetyenziswa kwiimveliso zabantwana, izixhobo zonyango, iimveliso eziphezulu, njl. Njengee-pacifiers zabantwana, iiseti zokunyuswa kwezonyango, iiklabhu zegalufa, njl., Kodwa kufanelekile nakwimveliso yezixhobo zeemoto.
Izinto eziluncedo ze-TPE izinto:
I-TPE inokudityaniswa nokubumba ngenaliti yokubumba, ukuphelisa ukusetyenziswa kwezongezo ezinje ngeglu, ukuze loo nto ingachaphazeleka zizinto zangaphandle, ke ngoko akukho vumba likhethekileyo kwaye akukho kucaphuka komzimba womntu. Kwiintsapho ezinabafazi abakhulelweyo kunye neentsana, iimveliso ezikhuselekileyo zokusingqongileyo nezikhuselekileyo ze-TPE nazo ziyimfuneko kakhulu.
I-TPE okwangoku yinto eyamkelwa kwilizwe liphela ngezinto ezinobuhlobo, kwaye iimveliso ze-TPE zihlala kwindawo ephambili kwimarike yaseYurophu naseMelika. Ke sisebenzisa izinto ze-TPE kwiimveliso zethu.
Xa kuthelekiswa ne zemveli isikhumba enkulu-ezifakwe imethi iimoto usebenzisa usifake kunye nobuchwepheshe yemveliso synthesis, TPE iimoto iimoto ungenza inkqubo ehlangeneyo ziphene yokubumba. Inkqubo yokulungisa ishenxisa ukusetyenziswa kwezongezo ezinje ngeglu kunye ne-formaldehyde, ukuze izinto ezibonakalayo ze-TPE zingachaphazeleka zizinto zangaphandle, kwaye zingenalo ivumba elikhethekileyo. Izinto ezinobungozi ziyaveliswa kwaye azikhuthazi umzimba womntu, zisenza iimethi zemoto zibe nobubele kwindalo kwaye zomelele.
Izinto ze-TPE zinokumelana kwamanzi kakuhle.Ingavaswa ngokuthe ngqo ngamanzi ngenkathalo efanelekileyo.Ukuthelekiswa nengxaki yemidlalo yemveli yesikhumba engenakuhlanjwa, iimethi zemoto ze-TPE zinokuhlanjwa ngokuthe ngqo ngompu wamanzi, kwaye zinokulayishwa imoto emva kokuba yomisiwe. Kukwalula ngakumbi ukukhathalela.
Iipeti zemoto zeDeao zikwanendawo eyahlukileyo emile okwe-arc encinci kunye noyilo lokuphambuka, okunokuthi kukhusele i-suede ngaphakathi emotweni ngelixa kuthintela ngokufanelekileyo amabala amanzi ekugaleleni emotweni.
Oku kungasentla kukwaziswa kwento ekrwada eyi-TPE. Ukubona apha, sinokuqonda ngokusisiseko ukuhlanganiswa kwezinto ze-TPE kunye nezinye zeempawu zazo, ukuze sikwazi ukuqonda amathemba abanzi eemveliso ze-TPE.